सुजिता भण्डारीको देवघाटमा अन्येष्टि, स्थानीय गएनन् मलामी ! – Taja Khawar
सुजिता भण्डारीको देवघाटमा अन्येष्टि, स्थानीय गएनन् मलामी !
प्रकाशित मिति: बिहिबार, साउन ०७, २०७८ समय: १:२०:५०
राप्ती नगरपालिका–३ की २३ वर्षीया सुजिता भण्डारीको देवघाटमा दाहसंस्कार अन्येष्टि गरिएको छ ।
तर, गाउँलेहरुले भने सत्यतथ्य सार्वजनिक नहुँदासम्म शव नबुझ्न आग्रह गरेका थिए ।
सोमबार सुजिताका बुवाले अन्येष्टि गर्दा घाटमा स्थानीय अनुपस्थित थिए भने जनप्रतिनिधि तथा राजनीति दलका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो । गत असार ११ गतेदेखि वे-पत्ता सुजिताको असार २० गते घरबाट करिब ५ किलोमिटर टाढाको जंगलमा शव फेला परेको थियो ।
असार २२ गते काठमाडौं शिक्षण अस्पतालमा पोष्ट-मार्टम गर्दा शरीरमा कुनै चोटपटक नदेखिएको साथै ब-ला-त्कार समेत नभएको चिकित्सकले बताएका थिए । त्यसपछि भिसेरा परीक्षण गराए पनि रिपोर्ट भने अझै नआएको चितवन प्रहरीले जनाएको छ ।
छिमेकी तथा आफन्तले घटनाको सत्यतथ्य चाँडै सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।
तीव्रगतिमा गइरहेको बस अनियन्त्रित भई दु,र्घ,ट,ना हुँदा मुखियाको घटनास्थलमै मृ,त्यु , एक दर्जन भन्दा बढी यात्रु घा,इ,ते
1 Trick Kills Erectile Dysfunction: Doctors Are Speechless!
सिरहाको जिरोमाइल–बडियारपट्टी सहायक सडकअन्तर्गत धनगढीमाई नगरपालिका–५ सन्तनगरमा गए राति यात्रुबाहक बस दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने १३ यात्रु घाइते भएका छन् ।
जिरोमाइलबाट बडियारपट्टी जाने क्रममा बा२ख ७१ नंको बस पल्टिँदा बसमा सवार बरियारपट्टि गाँउपालिका–३ निवासी ३५ वर्षीय गणेश मुखियाको मृ,त्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
तीव्रगतिमा गइरहेको बस अनियन्त्रित भई दु,र्घ,ट,ना हुँदा मुखियाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जनाएको छ । दु,र्घ,टनामा परी घाइते भएका १३ जनाको स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । दु,र्घ,टनालगत्तै चालक फरार रहेकाले खोजीकार्य जारी रहेको जनाएको छ ।
जिरोमाइलबाट बडियारपट्टी जाने क्रममा बा२ख ७१ नंको बस प ल्टिँ दा बसमा सवार बरियारपट्टि गाँउपालिका–३ निवासी ३५ वर्षीय गणेश मुखियाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
Last Updated on: July 22nd, 2021 at 1:20 am